Shariif Xasan oo Xildhibaanada Beeshiisa ku kiciyey Aadan Madoobe iyo khilaafkii xukuumada ridada oo sii xoogaystay. | Halganka Online
Shariif Xasan oo Xildhibaanada Beeshiisa ku kiciyey Aadan Madoobe iyo khilaafkii xukuumada ridada oo sii xoogaystay.
Posted on Maajo 1, 2010 by halganka
Gudoomiyihii hore ee Baarlamanka DKMG ah ayaa mucaaradad aad u xoogan kala kulmaya xildhibaano ay isku beel yihiin oo ay isla aaminsanyihiin sharciga gacan ku rimiska ah ee Mbaghati Kenya lagu soo dhisay.
Kulan balaaran oo ay Muqdisho ku yeesheen Xildhibaano sheegay in ay ka soo jeedaan Gobalada Bay iyo Bakool ayay ku sheegeen in ay kalsoonidii kala laabteen gudoomiyihii Baarlamanka Aadan Madoobe oo la sheegay in uu waqtigu ka dhamaaday xilli hore.
Madaxda ugu saraysa Dowlada KMG ah oo shalay Muqdisho ka soo saaray Bayaan Qaylo dhaan ah ayaa u muuqda in aysan waxba faraha ku hayn marka loo eego khilaafka sii xoogaysanaya.
Aadan Madoobe waxaa si hoose kursigiisa dab ugu shidaya Shariif Xasan Sheykh Aadan oo la rumaysanyahay in uu ka awood badanyahay Shariif Axmed oo ah madaxa ugu sareeya DKMG ah.
In kabadan 82 Xildhibaan oo ka tirsan Beesha Aadan Madoobe oo shalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay kalsoonidii kala laabteen Aadan Madoobe islamarkaana beeshoodu soo sharaxa doono ninkii gudoomiyaha Baarlamanka noqon lahaa.
Shariif Sheykh Aadan oo asagu isku raba in uu noqdo gudoomiyaha Baarlamanka ayaa markii ugu horaysay qaadaya talaabo uusan raali ka ahayn Shariif Sheykh Axmed oo larumaysanyahay in uu yahay Ardayga dhanka Siyaasadda ee shariif Xasan.
Ilo Xog ogaal ah ayaa xaqiijinaya in Shariif Xasan iyo Max’med Qanyare ay dhaqaale badan ku bixinayaan kacdoonka ka dhanka ah Aadan Madoobe.
Cumar C/rashii iyo Shariif Sheykh Axmed ayaa shalay Muqdisho ka sheegay in khilaafka jira uu naafaynayo jiritaanka kooxdooda.
Madoobe Nuunow oo DKMG ah ugu magacaaban wasiirka Dastuurka iyo arrimaha Federaalka ayaa Muqdisho ka sheegay in Aadan Madoobe yahay Xildhibaan baarlamanka ka tirsan oo qura “Aadan Madoobe waa dhacay Beesha Digil iyo Mirifle waxay wadaa sidii ay ku keensan lahayd ninkii noqon lahaa gudoomiyaha Baarlamanka”.
« Dowro islaami ah oo lagu soo gaba gabeeyay magaalada Baydhabo ee Xarunta gobolka Baay. Waaliga Dhoobleey “Shacabka waxaan u sheegaynaa in Gaandi uu yahay Gaal Naag Faransiis ah qaba, Axmed Madoobe-na kama ag dheera isaga ayuu heshiis lagalay waana ku Jihaadaynaa »